WAR CUSUB: Maxaa ka jira in madaxda DF Somaliya ay Shuruudo ku xireen Sii-deynta Wasiirka Amniga ee Jubbaland?! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta WAR CUSUB: Maxaa ka jira in madaxda DF Somaliya ay Shuruudo ku...
WAR CUSUB: Maxaa ka jira in madaxda DF Somaliya ay Shuruudo ku xireen Sii-deynta Wasiirka Amniga ee Jubbaland?!
Wasiirka Amniga ee Jubbaland, Cabdirashiid Xasan Nuur Janan
Muqdisho (Halqaran.com) – Guddi ka socday maamulka Jubbaland iyo Waxgaradka Gedo oo la kulmay Madaxda Hay’adda Nabadsugidda Soomaaliya iyo Wasiiro ka tirsan Dowladda Federaalka ayaa sheegay in la hor dhigay Shuruudo ka yimid dhanka Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kuwaasoo looga baahan yahay Jubbaland in ay fuliso si loo sii daayo Wasiirka Amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janan .
Gudoomiye Ku Xigeenka Gudiga Madaxa Banaan Xaduudaha Iyo Doorashooyinka Jubaland Axmed Maxamuud Cumar, ayaa sheegay in ay la kulmeen Mas’uuliyiinta dowladda, laakiin laga dalbaday Shuruudo u muuqday kuwa siyaasadeed oo loo baahan yahay in la fuliyo si loo sii daayo Wasiir Janan.
”Kulamo aan la yeelaney Madaxda Hay’adda Nabadsugidda Soomaaliya iyo Wasiiro ka tirsan Dowladda Federaalka waxay na hor-dhigeen qodobo uu Madaxwaynuhu doonayo inaan fulino ka hor sii daynta Wasiirka”. ayuu yiri Axmed Cumar.
Sidoo kale, waxaa la sheegaya in qodobadda la hor dhigay dhammaantood ay yihiin kuwo ku aadan kala qeybinta bulshadda degaanada maamulka Jubbaland.
”Qodobadda qaarkood waxay ahaayeen qabyaalad cad, kala qaybin iyo iska horkeen dadka reer Jubbaland”, ayuu yiri Gudoomiye ku xigeenka Guddiga doorashooyinka Jubbaland.
Ugu dambeyn, Guddoomiye Axmed ayaa warbaahinta magaalada Muqdisho u xaqiijiyay warkaan, waxaana uu sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu qaadi doono Wixii dhibaato ah oo ka dhasha xariga Wasiirka, maadaama dadka degaanadaasi lagu waddo kala qeybin.
Shuruudo lagu xiray
wasiir amniga Jubbaland